Fasax mushahar leh: xaq u lahaansho
Fasaxa lacag bixinta waa in, mabda 'ahaan, la qaadaa sanad walba. In ka badan xuquuq, shaqaaluhu waxaa ku waajib ah inuu ka nasto shaqadiisa.
Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin fasax ah 2,5 maalmood oo shaqo bil kasta, tusaale ahaan 30 maalmood oo shaqo (5 toddobaad) sanad shaqo oo buuxa.
Muddada tixraaca ee helitaanka fasaxa waxaa dejiya heshiiska shirkadda, ama ku guuldareysta taas heshiis wadajir ah.
Iyadoo aysan jirin wax shuruud qandaraas ah, muddada bixinta ayaa loo qorsheeyay laga bilaabo Juun 1 ee sanadkii hore ilaa May 31 ee sanadka hadda. Muddadani way ka duwan tahay marka shirkaddu ku xiran tahay sanduuqa fasaxa ee la bixiyo, sida tusaale ahaan warshadaha dhismaha. Xaaladdan oo kale, waxaa loo qoondeeyay Abriil 1.
Fasax mushahar leh: deji muddada la qaatay
Fasaxyada la bixiyo waxaa la qaataa xilli ay ku jiraan muddada u dhexeysa 1da Maajo ilaa Oktoobar 31. Qodobkaan waa mid nidaam dowladeed leh.
Loo-shaqeeyaha waa inuu qaataa tallaabada fasaxa, iyo sidoo kale amarka bixitaanka ee shirkadiisa.
Muddada fasaxa waxaa lagu jaan goyn karaa heshiiska shirkadda, ama haddii taas la waaya, heshiiskaaga wadajirka ah.
haa, waa suurtagal in laga wada hadlo muddada dejinta
Xaq ma u leeyahay inaan ka gorgortamo muddada aan qaadanaayo fasaxa mushaharka leh? July 8th, 2021Tranquillus
READ Tababarka caalamiga ah ee Cnam - Tababbarka Cnam ayaa lagu bixiyaa Morocco
horeXirmada Maalinta: helitaanka hawlgab horumarsan ugu dambeyn Janaayo 1, 2022
socdaSideed uga fogaan kartaa khaladaadka higaada shaqada?